တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nikolay Listopadov အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Eduard Okladnikov နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်း မိမိ၏ ရုရှားခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သည့်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ 2018 International Army Game ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် အတွေ့အကြုံများစွာရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် နားလည်မှုရှိသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင် ရှိပြီး မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို အလေးထား ပါကြောင်း ဦးစွာ ပြောကြား၍ ရခိုင်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်၏ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက် များသည် ဖြစ်စဉ်မှန်များပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် တပ်မတော်ဖြစ်သည့် အတွက် တပ်မတော်၏ပြောဆိုချက်၊ ထုတ်ပြန်ချက်များသည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည့်တပ်မတော်တိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့်အညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိပြီး ယင်းသို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်လည်း တရားမျှတမှုရှိပါကြောင်း၊ သို့သော်မိမိတို့နိုင်ငံအပေါ် နည်းမျိုးစုံအကြောင်းပြလျက် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကို နိုင်ငံတကာက လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု စရိုက် လက္ခဏာများကို ထိခိုက်စေမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို တပ်မတော်အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာသည်တစ်ဖက်သတ်စုံစမ်းရရှိချက်များဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မှန်ကန်စွာရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ပြဿနာများကို ဖန်တီးနေ၍သာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခု ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက် နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ်မီတပ်မတော် (Standard Army) တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည့်၊ နိုင်ငံတော်က အားကိုးရသည့် တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်း လျက်ရှိသည့်အတွက် ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသည့် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မိတ်ဝတ်မပျက်ဆက်ဆံရေးနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နည်းပညာပိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပညာတော်သင် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် International Army Game ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nikolay Listopadov တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှား ဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Nikolay Listopadov အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Colonel Eduard Okladnikov နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက လှနျခဲ့သညျ့ သွဂုတျလအတှငျး မိမိ၏ ရုရှားခရီးစဉျသညျ အောငျမွငျသညျ့ခရီးစဉျတဈခုဖွဈပါကွောငျး၊ 2018 International Army Game ၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးအားဖွငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောအတှကျ အတှအေ့ကွုံမြားစှာရရှိခဲ့ပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ဖွဈစဉျဖွဈရပျမြားအပျေါ ရုရှားနိုငျငံအနဖွေငျ့ နားလညျမှုရှိသညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျ ရှိပွီး မိတျဆှကေောငျးနိုငျငံတဈခုလညျးဖွဈသညျ့အတှကျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို အလေးထား ပါကွောငျး ဦးစှာ ပွောကွား၍ ရခိုငျဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး တပျမတျော၏ထုတျပွနျပွောဆိုခကျြ မြားသညျ ဖွဈစဉျမှနျမြားပငျဖွဈကွောငျး၊ နိုငျငံတျောကိုကိုယျစားပွုသညျ့ တပျမတျောဖွဈသညျ့ အတှကျ တပျမတျော၏ပွောဆိုခကျြ၊ ထုတျပွနျခကျြမြားသညျ နိုငျငံတျောကို ကိုယျစားပွုပါကွောငျး၊ ကမ်ဘာပျေါတှငျရှိသညျ့တပျမတျောတိုငျးသညျ မိမိတို့နိုငျငံနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားကို ကာကှယျရနျ တာဝနျရှိပါကွောငျး၊ မိမိတို့ တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး နိုငျငံနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ တာဝနျရှိသကဲ့သို့ ဥပဒနှေငျ့အညီကာကှယျစောငျ့ရှောကျလကျြရှိပွီး ယငျးသို့ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျခွငျးသညျလညျး တရားမြှတမှုရှိပါကွောငျး၊ သို့သျောမိမိတို့နိုငျငံအပျေါ နညျးမြိုးစုံအကွောငျးပွလကျြ မဟုတျမမှနျစှပျစှဲပွောဆိုမှုမြားကို နိုငျငံတကာက လုပျဆောငျလကျြ ရှိကွောငျး၊ နိုငျငံ၏တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး၊ အခွခေံဥပဒတှေငျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ့ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြး၏ ရပိုငျခှငျ့နှငျ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှု စရိုကျ လက်ခဏာမြားကို ထိခိုကျစမေညျ့လုပျဆောငျခကျြမြားကို တပျမတျောအနဖွေငျ့ ဥပဒနှေငျ့အညီ ထိနျးသိမျးကာကှယျစောငျ့ရှောကျလကျြရှိကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အစီရငျခံစာသညျတဈဖကျသတျစုံစမျးရရှိခကျြမြားဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ မိတျဆှနေိုငျငံမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ မှနျကနျစှာရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ ငွိမျးခမျြးရေးမရှိလြှငျ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ငွိမျးခမျြးစှာနထေိုငျနိုငျမညျမဟုတျကွောငျး၊ ပွဿနာမြားကို ဖနျတီးနေ၍သာ ငွိမျးခမျြးရေးကိုထိခိုကျနခွေငျးဖွဈကွောငျး၊ နိုငျငံတဈခု ငွိမျးခမျြးရေးမရှိလြှငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျမှုရှိမညျမဟုတျကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျဆောငျရှကျ နခွေငျး ဖွဈကွောငျး၊ ခတျေမီတပျမတျော (Standard Army) တညျဆောကျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ နိုငျငံတျောကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ့၊ နိုငျငံတျောက အားကိုးရသညျ့ တပျမတျောတဈရပျဖွဈအောငျ တညျဆောကျနခွေငျးဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျး လကျြရှိသညျ့အတှကျ ပွညျသူက ရှေးခယျြထားသညျ့ အစိုးရနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရမညျ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား မိတျဝတျမပကျြဆကျဆံရေးနှငျ့ မဟာဗြူဟာမွောကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ နညျးပညာပိုငျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ပညာတျောသငျ သငျကွားရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ International Army Game ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Nikolay Listopadov တို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။